ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပူးတွဲဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကို ရာထူးဖယ်ရှား၊ ဦးဌေးဦးကို တင်မြှောက်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပူးတွဲဥက္ကဌ ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကို တွေ့ရစဉ်
သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးကို မေးမြန်းချက်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပူးတွဲ ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ သူရဦးရွှေမန်းကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ဒုတိယဥက္ကဌတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးဦးကို ပူးတွဲဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ပေးလိုက်သလို ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေ ကိုလည်း အစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ နေပြည်တော် က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးချုပ်မှာ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အရင်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဦးပိုက်ထွေး က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ဥက္ကဌဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်ကြောင်း အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ပါတီဥက္ကဌကတော့ ဦးသိန်းစိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင် ရတဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပါတီဥက္ကဌတာဝန် မထမ်းဆောင်နိုင်လို့သာ ကျနော်တို့က ဒုဥက္ကဌ ကို ခေတ္တဥက္ကဌ ပူးတွဲတာဝန် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တု့ိပါတီဟာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကနေ ပါတီအဖြစ် စတင်ပြောင်းလဲစဉ်ကတည်းက ကျနော်တို့ပါတီ ဥက္ကဌဟာ ဦးသိန်းစိန် ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ကျနော်တို့ပါတီ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စာရင်း မှာလည်းပဲ ပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်ပဲဖြစ်ကြောင်း ကျနော်ဦးစွာရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်"
ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့ သူရဦးရွှေမန်းဟာ အသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ၅၃ ဦးစာရင်းထဲမှာတောင် မပါဝင်တော့ပါဘူး။ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တပ်မတော်ကနေ အငြိမ်းစားယူပြီး ပါတီကနေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရသက်ဆွေ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ သူရဦးရွှေမန်းဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေရသူဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီလုပ်ငန်းတွေကို ဖိဖိစီးစီးဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အတွက် ဦးဌေးဦးကို တာဝန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မနေ့ညက ပါတီရုံးချုပ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်က ဝိုင်းတယ်ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူတွေသာ ရုံးချုပ်ထဲမှာရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးကို RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တဆက်တည်း RFA သတင်းထောက် ကိုဝင်းကိုကိုလတ်ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကြံ့-ဖွံ့ခေါင်းဆောင် တချို့အပြုအမူ သုံးသပ်ဖို့လိုမယ်လို့ ဦးရွှေမန်းပြော
သူရဦးရွှေမန်း အပါအဝင် ၁၂ ဦးကို ပါတီကထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်
နိုင်ငံကိုလည်းအုပ်ချုပ်စားသောက်တယ်..... ပါတီမှာလည်း ဥက္ကဌ လုပ်ဦးမယ်...... ရွှေမန်းကို ပေးထားတယ် လို့လည်းပြောတယ်.... အခုကျတော့ ထိုင်ခုံပြန်ထိုင်ချင်လာတယ်..... နိုင်ငံထိုင်ခုံ ပျောက်သွားရင် အဆင်သင့်ထိုင်နိုင်အောင် အခုကတည်းက ရှင်းထားတာဖြစ်မှာပေါ့။ ပါတီ ကိစ္စနှင့် ရဲ၊ စစ်တပ် ဆိုတာ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်အောင် နိုင်ငံကို လုပ်ကြအုံးမှာလည်း.... နိုင်ငံတော်ပိုင် ရဲကကော ပါတီပိုင် ဖြစ်သွားပြီလား? ရဲတွေဆိုတာ တရားရုံးရဲ လုပ်ငန်းအားလုံးကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့နားလည် ထားတာ .. အခုတော့ မဟုတ်တော့ပြီကော.... အဲဒါကြောင့် လည်း ပြည်သူ နှင့် ကျောင်းသားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်နေတာကိုး။ အဲ့ဒီကိုယ်ရိုက်တဲ့ပြည်သူထဲမှာ ကိုယ့်မိဘနှင့် သားသမီး မောင်နှမ မိတ်ဆွေတွေလည်းပါတယ် ဆိုတာ သတိလေးတော့ရှိကြပါ။ ရဲကကော ဘယ်ကလာသလဲ။။ ပြည်သူကလာတာမဟုတ်ဘူးလား။။။ သီးသန့် ရဲဆိုပြီး လူမဟုတ်တဲ့တခြားက မွေးလာကြတာလား? မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ရင်လေးလိုက်တာနော..... ကိုယ့်ဖို့ဘဲမကြည့်ကြနဲ့......
Aug 15, 2015 02:26 AM
ပြည်သူ့ဆန္ဒ ကို လေးစားတဲ့ လူ ကိုဖယ်ရှားပြီး ပြည်သူ ဆန္ဒ ကို တချိန်လုံး ဆန့်ကျင် နေတဲ့ လူတွေ ကိုတင် လိုက်တာ ကိကြည့်။ ဒီအတိုင်း ဆို ဘယ်သူမှ မဲထည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မနိုင်ရင် စစ်တပ်က အခု သူတို့လုပ်သလို အဲဒီလူတွေ နေရာရအောင် အတင်းအဓမ လုပ်ယူလိမ့်မယ်။ မယုံရင် ကြည့်နေ။
Aug 14, 2015 08:28 PM
Shwe Mann being moved from his post... who is really the mover....? It is mystery...!
Aug 14, 2015 02:44 AM
တချိန်တုန်းက ဘင်္ဂလီ တွေ ကို white card ထုတ်ပေးပြီး မဲပေးခိုင်းခဲတဲ့ လူကို ဥက္ကဌ ခန့် တယ်ဆိုတော့ အရေးယူ ရမဲ့အစား မြှောက်စား လိုက်တာပေါ့။ စက်မှု(၁) က သူခိုးကြီးကို ပြည်ထောင်စု ဘဏ် ဥက္ကဌ ခန့်တဲ့ အတွေးအခေါ် မျိုးပဲ။
Aug 13, 2015 08:42 PM
ဟိုတလော က စစ်တပ် က ခြေ/ဥ ပြင် ရေး ကြိုတင် အသိမပေးပဲ လွှတ်တော် တင်ရပါ့ မလား ပြောဆိူနေတည်းက ဒီလို လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်း မိပြီးသား။ စစ်တပ်ဟာ အာဏာရှင် ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်သူကို ကြည့်မဲ့လူ ဆို ရှင်းပြစ်တယ်။ တစ်ချို့စစ်ဗိုလ်တွေ ဟာ စစ်တပ်ထဲ မှာဝါသနာ ပါလို့ဝင် လာပြီး လုပ်သက် ရာထူး အတော်အတန် ရလာမှ အာဏာရှင် တစ်ယောက်က စိတ်ကူးပေါက်သလို မင်းလူဝတ်လဲ ဟိုနေရာသွား မင်းက ဒီကိုတက် ပြောတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ် နေကြရတာ နောက်သူတို့လဲ စိတ်မထင်ရော ပစ်စလက်ခတ်တွေ လုပ်ပြစ်လိုက်ရော။ အဲဒီနည်းနဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိပြီလည်း ခံနေကြရတာ။ အာဏာရှင် စံနစ် ချုပ်ငြိမ်းမှ အေးချမ်းမယ်။ နို့မို့ရင် အတွင်းရြေ အပြင်ပါ အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
Aug 13, 2015 08:35 PM